Qoyska Lionel Messi oo doonaya inuu laacibka Paris Saint-Germain ku laabto Barcelona & Aabbaha dhalay xiddigan oo… – Gool FM
Ahmed Nur January 16, 2022
(Paris) 16 Jan 2022. Qoyska xiddiga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Lionel Messi ayaa lasoo warinayaa inay laacibkan ku cadaadinayaan inuu ku laabto naadiga Barcelona ee uu kusoo qaatay guud ahaan waayihiisii ciyaareed kahor inta uusan xagaagan usoo dhaqaaqin PSG.
Sida laga soso xigtay warsidaha El Nacional, Messi xaaskiisa Antonela Roccuzzo ayaa iib-geyneysa fikradda uu seygeeda ugu laabanayo Camp Nou xagaagan maadaama ay la qabsan la’yihiin jawiga magaalada Paris iyo saaxiibbo la’aanta caruurteeda.
Wargeyska ayaa intaas raaciyay in imaanshaha Xavi ee naadiga Barca isagoo macallin ah iyo soo laabashada waayo-aragga difaaca midig ee Dani Alves ay dardar gelineyso in arrintan ay suuro gasho, hase ahaatee, Jorge Messi oo ah aabbaha dhalay Leo sidoo kalena ah wakiilkiisa ayaa taasi kasoo horjeeda isagoo qaba inay Barcelona iyaga khiyaantay.
Si kastaba ha ahaatee, 34-sano jirka kabtanka u ah xulka qaranka Argentina ayaa Parc des Princess ku jooga qandaraas ku eg 2023 isla markaana lagu dari karo sanad dheeraad ah haddii lagu heshiiyo, waxaana Messi uu ku jiraa qaab ciyaareed hoose marka loo eego inuu horyaalka Ligue 1 ka dhaliyay kaliya hal gool isagoo saftay 11 kulan inkastoo uu shan gool ka dhaliyay Champions League kaddib shan kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Horudhac: Athletic Club vs Real Madrid...(Tartanka Spanish Super Cup oo caawa lagu soo gabagabeynayo Sacuudiga & Waxyaabaha aad uga baahantahay kulankan)